Soomaaliya, 13 February 2019
Boosaaso: Dad loo soo xirey dilka madaxii P&O ee dekadda Boosaaso
Booliiska maamulka Puntland ayaa sheegay inay rag usoo qab-qabteen dilal loo gaystay ganacsade iyo maareeyihii shirkadda P&O Paul Fermosa ee dhowaan lagu dilay magaalada Boosaaso.
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha, Qeybta 458-aad
Ku soo dhawaada barnaaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha. Qeybtanna waa qeybtii 458-aad. Axmed Faarax Cali (Idaajaa) ayaa soo jeedinaya.
Weeraro Khasaare Sababay oo Muqdisho ka Dhacay
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho waxay sheegayaan in qarax uu ka dhacay meel u dhow isgoyska KM5, halkaasi oo la sheegay inuu ku qarxay baabuur marayey
Trump oo Ugu Baaqay Ilhan Omar inay Is-casisho
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa inay is casisho ugu baaqay Ilhan Cumar oo ah xubin ka tirsan Aqalka Hoose ee Congresska Maraykanka, ka dib markii ay Isniintii raali galin ka bixisay haddalo ay qortay oo loo arkay inay dadka Yuhuudda ka soo horjeedaan.
Biyo Yaraan ka Jirta Deegaanka Kulaal
Wararka ka imanaya deegaanka Kulaal ee gobolka Sool ayaa sheegaya in deegaankaas ay biyo la’aan darani ka jirto. Mas’uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay in riiggii ceelbiyoodka deegaanku uu jabay, taasina ay keentay in xoolo deegaanka ku noolaa ay dhintaan.
Muqdisho oo lagu Qabtay Wacyigalinta Gudniinka Fircooniga
Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka haweenka lagu fuliyo gudniinka fircooniga ah, waxaana jira haween badan oo u dhiban xaaladaha ka dhashay gudniinka fircooniga ah.
Boosaaso: Dad ku eedeysan tahriibin oo la soo xirey
Ciidamada ammaanka ee magaalada Boosaaso ayaa howl-gal ay ka sameeyeen magaalada ku soo qabtay dad ay sheegeen inay falal amni darro ah magaalada ka wadeen.
Muqdisho: Sarkaal boolis ah oo qarax lagu diley
Sarkaal ka tirsanaa ciidamada booliska ayaa ku dhintay qarax lagu xirey mid ka mid ah gaadiidka ciidamada booliska ee magaalada Muqdisho maanta.
Dhimasho iyo dhaawac ka dhashay weerar ka dhacay Goldogob
Wararka ka imanaya degmada Goldogob ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof ku dhintay afar kalena ay ku dhaawacmeen kadib weerar xalay ka dhacay degmadaasi.